Translate kuæama from Croatian to Burmese - MyMemory
Results for kuæama translation from Croatian to Burmese
Razoren je grad nitavila, zatvoren ulaz svim kuæama.
လွတ်လပ်သောမြို့သည် ပြိုပျက်လေပြီ။ အ ဘယ်သူမျှ မဝင်စေခြင်းငှါ၊ အိမ်များကို ပိတ်ထားကြပြီ။
A vama je vrijeme da stanujete u pokrivenim kuæama, dok je ovaj Dom razvaljen.
Kad su Izraelci vidjeli da je Abimelek mrtav, svi se vratie svojim kuæama.
အဘိမလက်သေကြောင်းကို ဣသရေလလူတို့သည် သိမြင်လျှင်၊ အသီးအသီး မိမိတို့နေရာသို့ ပြန်သွားကြ၏။
ðakoni neka budu jedne ene muevi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kuæama.
သင်းထောက်သည် မယားတယောက်တည်းရှိရမည်။ မိမိသားသမီးနှင့် အိမ်သူအိမ်သားတို့ကို ကောင်းမွန်စွာ အုပ်ချုပ်သောသူဖြစ်ရမည်။
Mi se svojim kuæama neæemo vraæati sve dok svaki Izraelac ne zaposjedne svoju batinu.
ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် အမွေခံ ရသောမြေကို မဝင်စားမှီတိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့သည် ကိုယ်အိမ်သို့ မပြန်မလာပါ။
I svaki su dan u Hramu i po kuæama neprestance uèili i navjeæivali Krista, Isusa.
nita korisno nisam propustio navijestiti vam i nauèiti vas - javno i po kuæama;
သင်တို့အကျိုးတစုံတခုကိုမျှ ငါမထိမ်မဝှက်။ လူစုဝေးရာ၌၎င်း၊ အိမ်များ၌၎င်း၊ သင်တို့အားဟောပြော ၍ ဆုံးမဩဝါဒ ပေးသဖြင့်၊
Svaki bi dan jednoduno i postojano hrlili u Hram, u kuæama bi lomili kruh te u radosti i prostodunosti srca zajednièki uzimali hranu
ထိုသူတို့သည်လည်း ဗိမာန်တော်၌ နေ့တိုင်းအစဉ်တညီတညွတ်တည်းနေ၍၊ ကိုယ်အိမ်၌ မုန့်ကိုဖဲ့ လျက် ကြည်ဖြူရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် အစာအာဟာရကိုသုံးဆောင်ကြ၏။
Ako ih otpravim gladne njihovim kuæama, klonut æe putom. A neki su od njih doli iz daleka."
အချို့တို့သည် အဝေးကလာသည်ဖြစ်၍၊ အစာမစားမှီ သူတို့အိမ်သို့ ငါလွှတ်လျှင် လမ်းခရီး၌ မောကြ လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
Jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov, o kuæama ovoga grada i o dvorima kraljeva judejskih, poruenim zbog nasipa i maèa,
ပြအိုးမြေရိုးဖြင့်၎င်း၊ ထားဖြင့်၎င်း ပြိုပျက်သော ဤမြို့၏အိမ်များ၊ ယုဒရှင်ဘုရင်၏ ဘုံဗိမာန်များကို ရည်မှတ်၍၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊
opljaèkaju sva njihova dobra,asvu im djecu i ene - sve to je bilo po kuæama - odvedu u roblje.
သူတို့သားမယား သူငယ်အပေါင်းကို၎င်း သိမ်း ယူ၍၊ အိမ်တို့၌ရှိသမျှကိုလည်း လုယက်ဖျက်ဆီးကြ၏။
Jahve dolazi na sud sa starjeinama i glavarima svog naroda: "Vinograd ste moj opustoili, u vaim je kuæama to oteste siromahu.
ထာဝရဘုရားသည် မိမိလူတို့တွင်၊ အသက်ကြီး သူတို့ကို၎င်း၊ မင်းတို့ကို၎င်း တရားစီရင်ရာ၌ ဆီးကြိုး တော်မူမည်။ သင်တို့သည် ငါ့ဥယျာဉ်တော်ကိုစားကြပြီ။ ဆင်းရဲသောသူတို့၏ ဥစ္စာကို လုယူ၍၊ မိမိတို့အိမ်၌ သိုထားကြပြီ။
Za njima su pak popravljali Benjamin i Haub suèelice svojim kuæama. Za njima je popravljao Azarja, sin Ananijina sina Maaseje, nasuprot svojoj kuæi.
သူတို့နောက်မှ၊ ဗင်္ယာမိန်နှင့် ဟာရှုပ်သည် မိမိအိမ် တဘက်တချက်၌ပြင်ကြ၏။ သူတို့နောက်မှ၊ အာနနိသားဖြစ်သော မာသေယ၏သား အာဇရိသည် မိမိအိမ် တဘက်တချက်၌ ပြင်၏။
A uz to se, obilazeæi po kuæama, nauèe biti besposlene, i ne samo besposlene, nego i brbljave i nametljive, govoreæi to ne bi smjele.
ထိုမှတပါး၊ တအိမ်မှတအိမ်သို့လည်၍ ပျင်းရိတတ်ကြ၏။ ပျင်းရိသည်သာမက၊ စကားများ၍ မပြော အပ်သောအရာကို ပြောသဖြင့်၊ ကိုယ်နှင့်မဆိုင်သောအမှု၌ ရောနှောသောသူဖြစ်တတ်ကြ၏။
Uæi æe u nj Kaldejci koji se bore protiv ovoga grada, ognjem æe ga unititi i spaliti ga zajedno s kuæama kojima su na krovovima Baalu palili tamjan i lijevali ljevanice tuðim bogovima, mene gnjeveæi.
ဤမြို့ကို တိုက်သော ခါလဒဲလူတို့သည်ဝင်၍ မီးရှို့ကြလိမ့်မည်။ ငါ့အမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှါ ဗာလ ဘုရားအဘို့ အိမ်မိုးပေါ်မှာ နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို၍၊ အခြား တပါးသော ဘုရားတို့အဘို့ သွန်းလောင်းရာပူဇော် သက္ကာ ကိုပြုရာ အိမ်များနှင့်တကွ၊ တမြို့လုံးကို မီးလောင်စေကြ လိမ့်မည်။
Bijahu veæ daleko od Mikine kuæe, kad gle - ljudi to ivljahu u susjednim kuæama, blizu Mikine, uzbunili se i krenuli u potjeru za Danovcima.
မိက္ခာအိမ်နှင့် ဝေးသောအခါ၊ မိက္ခာ၏ အိမ်နီးချင်းတို့သည် စည်းဝေး၍၊ ဒန်အမျိုးသားတို့ကို မှီ အောင် လိုက်ကြ၏။
Zatim je osmoga dana otpustio ljude; oni su blagosivljali kralja i odlazili svojim kuæama, veseli i zadovoljna srca zbog svega dobra to ga je Jahve uèinio svome sluzi Davidu i narodu svome Izraelu.
ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ လူများတို့ကို လွှတ်လိုက်တော်မူ၏။ သူတို့သည် ရှင်ဘုရင်ကို ကောင်းကြီး ပေးလျက်၊ ထာဝရဘုရားသည် မိမိကျွန်ဒါဝိဒ်နှင့် မိမိလူ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ ပြုတော်မူသမျှသော ကျေးဇူး တော်ကြောင့်၊ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းလျက် မိမိတို့နေရာသို့ ပြန်သွားကြ၏။
k'o ptice æe dohrliti iz Egipta, k'o golubica iz zemlje asirske, i naselit æu ih po kuæama njihovim - rijeè je Jahvina.
စာငှက်ကဲ့သို့ အဲဂုတ္တုပြည်မှ၎င်း၊ ချိုးကဲ့သို့ အာရှု ရိပြည်မှ၎င်း အလျင်အမြန်ပြေးကြ၍၊ သူတို့ကို နေရင်း အရပ်၌ ငါနေရာချမည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။
I taj kraj pripast æe u dio Ostatku doma Judina; tu æe oni izvoditi blago na pau; uveèer se odmarati u kuæama akelonskim, jer æe ih pohoditi Jahve, Bog njihov, i on æe promijeniti sudbinu njihovu.
Stoga, jer gazite siromaha, diuæi od njega porez u itu - u kuæama to ih sazdaste od tesanika nikad ivjet' neæete; iz ljupkih vinograda to ih posadiste nikad neæete piti vina.
သင်တို့သည် ဆင်းရဲသားကိုနှိပ်စက်၍ ဂျုံစပါးကို တောင်းခံတတ်သောကြောင့်၊ ဆစ်သောကျောက်နှင့် တိုက်ကိုတည်သော်လည်း ထိုတိုက်၌ မနေရကြ။ နှစ်သက်ဘွယ်သော စပျစ်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်သော်လည်း၊ စပျစ်ရည် ကို မသောက်ရကြ။
la pildora (Spanish>English)watashi wa kurosenai (Japanese>English)dégoûtants (French>Spanish)vorsaetzlicher (German>Spanish)dipadati (Indonesian>English)springsteen (English>Portuguese)zich eerder mis begrepen voelen (Dutch>French)can't do it now (English>German)echa maram (Tamil>English)taos puso kung tinatanggap (Tagalog>English)ano ang metaphor (Tagalog>English)match status (English>Hindi)ober heit (German>English)koostööprogrammidesse (Estonian>Lithuanian)comoqueilegña (Chamorro>Cebuano)enterprender espaÃol (Spanish>English)absorbing meaning in tagalog (English>Tagalog)krejnijiet (Italian>English)my favourite colours (English>French)habremos escalado (Spanish>Chinese (Simplified))kia ora korua (Maori>English)molti baci (Italian>French)grillagée (French>Danish)grace mile (Italian>Dutch)pretpostavio (Croatian>English)